MAHAFINY McDonnell Douglas MD-80 Series Multi-Livery FSX & P3D
Miaraka amin'ny fahazoan-dalan'i Mitsushi Yutaka (ex POSKY) i Rikoooo nanova an'io add-on ho an'ny FS2004 ho an'ny teratany FSX / P3Dv4 format. Misaotra ny rindrambaiko 3DS Max sy MCX nampianay kianja an-tsokosoko anisan'izany ny FMC (Honeywell), fanatsarana ny 2D Panel miaraka amin'ny fampidirana feno ny tsipika 3D virtoaly.
Ity fonosana ity dia misy ny andian-dahatsoratra MD-81/83 sy 88 misy atiny manana kalitao 17 ao anatin'izany ny fantsom-pitaovana alfa (taratra). Feo tena izy avy amin'ny motera Pratt & Whitney JT8D, paompy virtoaly 360 degre, tontonana 2D noforonin'i Marco Spada, maodelin'ny sidina tena mahafinaritra miaraka amina autopilot voamarina tsara, jiro milamina ary setroka.
Manoro hevitra izahay hanidina an'io fiaramanidina io amin'ny mode 2D Panel satria haingo kokoa ny VC noho ny azo ampiharina.
Vakio ny tahiry ho fampahalalana bebe kokoa.
Liveries: Delta Airlines - American Airlines - Allegiant - Aero Meksika - Aero Meksika AMS - Aero Republica - Avianca - Alitalia - TWA - Avaratra - Orient Thai - GMG - Royal Jordaniana - Iberia: Stephen Browning - Delta Airlines 1999 - Series Star Alliance - Meridiana Airlines.
Ny McDonnell Douglas MD-80 dia fiaramanidina amerikanina novokarin'ny mpanamboatra fiaramanidina McDonnell Douglas. Ity farany avy eo dia namolavola sy namidy fivoarana, MD-90. Rehefa avy nividy i McDonnell Douglas tamin'ny 1997, nanangana ny fiaramanidina Boeing, tamin'ny anaran'i Boeing 717
Downloads 81 216
Nohavaozina taminy 31-01-2020
Modely / VC nosoratan'i Mitsushi Yutaka (ex POSKY). teratany FSX/P3D fiovam-po sy fonosana amin'ny alàlan'i Rikoooo. 2D Panel avy amin'i Marco Spada